Wararka - Sida loo doorto daab caleemaha ower
Astaamaha lagu jaro cawska waa shaqo fidsan, hawlgal fudud, iyo awood goyn xoog leh oo loogu talagalay walxaha u baahan in la jaro, oo u badan cawska, waxayna ku habboon yihiin cawska iyo beeraha waaweyn ee wax soo saarka badan. Goynta cawsku waxay cawska ku jartaa dhaqdhaqaaqa xiirashada qaraabada ee mindi dhaqaaqa iyo mindida go'an ee goynta. Waxaa lagu gartaa jar jaban oo jajab ah iyo awood hoose oo loo baahan yahay, laakiin waxay leedahay la qabsi xumo xagga daaqa waana sahlan tahay in la xannibo. Waxay ku habboon tahay dhul daaqsimeedka fidsan iyo kuwa dabiiciga ah. Iyo hawlgallada dhul daaqsimeedka macmalka ah. Soo-saarista iyo adeegsiga gogosha cawska wareega ayaa bilaabmay bartamihii 1980-meeyadii. Ku tiirso daabka xawaaraha sare madaxa gooyaa ee gooya si aad u gooyso calafka. Iyadoo la horumarinayo sayniska iyo teknolojiyada, awooda shaqaynta ee alaabada goynta cawska ee dhawaan la hagaajiyay si weyn ayaa loo xoojiyay, xawaarahana si weyn ayaa loo hagaajiyay, iyadoo la badbaadinayo waqtiga shaqada ee shaqaalaha jarista dhirta isla markaana la keydsanayo ilo badan oo dad ah. Maanta waxaan inta badan kuu soo bandhigi doonaa sida loo doortodaab of caws jare.
Mindida qalabka wax lagu jaro waa a daab-galka badan-daab, iyo koontaroolku waa 2-baal-xaab-galka. Mabda'a shaqada waa isku mid. Kuligoodna waa goos goosyo xawaare sare ku socda. Aragti ahaan, daab qoryo qaabeeya geedaha qaabkeedu yahay Amni waa hubaal, xariijinta dhaadheer ayaa fiiqan, aagga daboolaaduna sidoo kale xoogaa waa yar yihiin. Cimri dhererka daabka cawdu wuxuu la xiriiraawax ka mid ah daab cawska, ma aha qaabka.
Xaqiiqdii, xulashada aaladaha goynta cows runtii waa muhiim. Waxaad dooran kartaa caleemaha goynta caws u dhigma munaasabado kala duwan. Mashiinka rooga mindi wareega ayaa lagu qalabeeyaa noocyo kala duwan oo ah mindiyo goobeed mindiyo goobeed si loo helo natiijooyinka ugu wanaagsan xaaladaha kala duwan ee cawska. Saamaynta qaab wanaagsan, garabka sare, garabka dhexe, iyo mindiyo wareega wareega waa in lagu kaabaa iyadoo loo eegayo astaamaha maxkamada dhamaadka si loo helo tayada goynta kala duwan. Haddii aad u baahan tahay inaad xoqdo cawska, waxaad dooran kartaa daab xoog badan oo ilkaha atom ah. Baalashka cawsku wuxuu burburin karaa cawska iyo caleemaha qaybo aad u wanaagsan oo aan saameyn ku yeelan muuqaalka.
Badeecado badan oo ilkaha ah (Gator Blade)
Zhengchida oo siiya garbiyo aqoon u leh Warshadaha daab daab OEMiyo suuqyada dambe sida tafaariiqleyda, jumladleyda, dukaamada waaweyn, iyo shirkadaha cawska. Ka dib horumar isdaba-joog ah oo ku dhowaad 20 sano ah, Zhengchida waxay leedahay wax soo saar ballaaran oo dhammaystiran oo ah hareeraha beerta. Zhengchida hada waxay leedahay in kabadan 2000 oo nooc oo kala duwan oo ah cawska goos gooska ah kaasoo daboolaya ku dhowaad dhammaan moodooyinka laga heli karo suuqa.